Ungayikhuphela njani iNgoma evela kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphele njani ingoma kwi-YouTube?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 440
Kweli nqaku ndiza kukubonisa indlela yokwenza enye yezona zinto zifunwayo kwi-intanethi kwihlabathi liphela kwaye nantsi indlela yokukhuphela ingoma ethile kwi Iphepha le-YouTube.
Kuqala kufuneka sicacise ukuba akukho ndlela yakwenza simahla ngeYouTubeOku akubonwa kakuhle liqonga, elikrokrisayo kakhulu kwiimveliso zabasebenzisi balo.
Amanyathelo okukhuphela enye Ingoma youtube.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena kwiakhawunti yakho YouTube kwaye ukhangele ingoma oyifunayo. Masithi ufuna ukukhuphela "Umntu onjengawe" nguAdele, emva koko chwetheza kwiinjini yokukhangela kwaye ukhethe ividiyo yakho. Eyona nto intle ukuyenza kukusoloko ukhuphela kwividiyo ethi amazwi okanye iingoma.
Ngenisa ikhonkco olikhethayo ngokungathi uza kudlala ividiyo. Beka indawo kwikhonkco okanye URL. Ikopi kaHiti okanye iCtrl + C.
Gcina eli khonkco likhutshiwe kwaye okwangoku, yiya kwisikhangeli sakho esikhethiweyo kunye nohlobo lwenjini yokukhangela "khuphela umculo kwiYouTube", Kwaye khangela. Okulandelayo, amawaka okhetho aya kuboniswa kuwe, nangona eyona ilungileyo ihlala ikhetha ukusebenzisa iindlela zokuqala, kuba zezona zidumileyo, oko kukuthi, ezona zisetyenziswa kakhulu ngabanye abasebenzisi, ke ngoko kufuneka babekhona ukuze babekhona, ukuze babe okona kulungileyo.
Nje ukuba ufumane enye oyithandayo, ncamathisela kwibar yokukhangela ngaphakathi kwiphepha lekhonkco obukhuphele ngaphambili. Kwiimeko ezininzi, iphepha liya kukubuza ukuba loluphi ukhetho olufunayo, Oko kukuthi, yintoni ifomathi ofuna ukuyiguqula. Kweli nqanaba qiniseka ukusebenzisa enye yeaudio.
Okokugqibela nqakraza ukukhuphela, oku kuya kuthatha imizuzu embalwa, imizuzwana okanye iiyure, kuxhomekeke ekubeni inzima kangakanani ividiyo kunye nonxibelelwano lwakho kwi-intanethikunjalo.
Nje ukuba kugqitywe ukwenziwa, uya kuba nakho ukhetho lokukhuphela kwaye unokuzikhuphelela ingoma yakho ngaphandle kwengxaki.
NgeNkulumbuso yoMculo ku-YouTube
Mva nje YouTube uthathe ukhetho kubathandi bomculo, ngamazwi akhe, oku kubandakanya ukuzisa elona thala leencwadi likhulu lomculo kwisixhobo esiphathwayo somsebenzisi othile, kodwa inguqulelo yePremiyamu yaqhubeka, kutheni ungazikhupheli iingoma?
Ngale ndlela kunokwenzeka ngokusemthethweni ukuthoba YouTube umculoUmda kuphela kukuba yinkonzo ehlawulelweyo, ngokubhaliselwa; kwaye nangona imali ingekho phezulu, kunzima kwabanye abantu ukufikelela kuyo.
Enye indlela elula yokwenza oku ngeYout.com, kuba ngale ndlela, awuzukuhamba ngobuchwephesha YouTube, Apha sichaza indlela:
Yiya kuYouTube kwaye ujonge umbono ofuna ukuwukhuphela, ungene kuwo.
Kwiwindows yokudlala, yiya ku I-URL okanye ikhonkco kwaye uzibeke kwi "e" yegama elithi YouTube kwaye uyicime, kunye no "b" kunye no "u". Cofa ukungena.
Iya kukuthumela kwelinye iphepha apho uya kubona khona umbono omncinci kwaye ukhetho olungezantsi "tshintsha ifomathi ukuya kwi-MP3, cofa ukhuphele ividiyo yakho. Le ndlela ikhawuleza kwaye ikhuselekile.
1 NgeNkulumbuso yoMculo ku-YouTube
Iividiyo ezikumgangatho ophezulu Unokuzikhuphela njani?
Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Instagram?